Omumu ihe zuo nke ndi ahia | Martech Zone
Omume nke Purzụta Ndị Na-azụ Ihe
N'abalị ọzọ enwere m ụgbọ ibu azụmahịa m zuru ezu na Apple.com na nke ohuru MacBook Pro na ngosipụta retina. Mkpịsị aka m kwụfere aka na bọtịnụ nzụta. MacBook Pro m dị ugbu a ka bụ igwe dị mma mana ọ na - amalite nwayọ nwayọ ma e jiri ya tụnyere Macs niile na - apụta. N'oge ahụ, m na-ekiri ihe nkiri telivishọn na-akọwa MacBook Pro na m nọ na iPad m. Ka m na-amalite na-eche banyere m online ịzụ àgwà, na o yiri ka ọ bụ iwu… M na-agagharị na ịzụ ahịa mgbe m na-ekiri telivishọn ma ọ bụ na-ezumike na-arụ ọrụ.
Site na Milo Infographic: Nnyocha nke otu e-tailing na-anọchite nke Corporationlọ Ọrụ Obodo ahụ chọpụtara na ndị na-azụ ahịa taa azụlitewo àgwà pụrụ iche tupu ịzụrụ - ọbụlagodi mgbe ha na-azụ ahịa na mpaghara - nke iji teknụzụ na ngwaọrụ mkpanaka na-achịkwa. Anyị na-eleba anya n'àgwà ịzụ ahịa tupu oge ịzụ ahịa nke ndị ahịa obodo a na ndị na-agagharị agagharị.
Mara: Azụtaghị m MacBook Pro. Ọ bụ ezie na enwere m ike ịkọwa ya maka ọrụ, anyị anọghị n'ọnọdụ iji nọrọ ego na ngwaike n'oge a. M ngwa ngwa tụbara flaapu na iPad m ma laghachi na nrọ banyere ya. (O nyekwara aka na ọ gaghị anọ izu ole na ole ma ọ bụrụ na azụrụ m ya).
Tags: àgwà ịzụ ahịaàgwà ecommerceàgwàinfographicipadMobile na Mbadamba ụrọtupu ịzụrụmbadamba
Ofgwọ nke Nnwale Weebụ Na-efu
Nke a bụ nnukwu ihe ederede maka na ọ naghị akachasị ele anya. Offọdụ n'ime ha nwere ụzọ nke ukwuu "Ama" na ha. Ma ọ dịkarịa ala, ọ na-akọwapụta ihe m na-agwa ndị mmadụ oge niile: You're bụ ndị na - azụ ahịa nwere ọgụgụ isi n’ezie, ha na - achọgharị mgbe niile n’igwe iji chọta gị, chọta nhọrọ ka mma, gụọ nyocha, ma chọpụta ọnụ ahịa.
PS Olileanya na ị ga-enweta macbook ọhụrụ ahụ n'oge na-adịghị anya!